R/W Khayre oo Daah-furay Shir lagu Soo Bandhigayay Dib-u-heshiinta Degmada Marka ee Shabeellaha Hoose[Sawirro] | SAHAN ONLINE
R/W Khayre oo Daah-furay Shir lagu Soo Bandhigayay Dib-u-heshiinta Degmada Marka ee Shabeellaha Hoose[Sawirro]
MUQDISHO – Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta ka qayb galay kulanka dib-u-heshiisiinta beelo ay codlaadi ku dhexmartay degmada Marka ee Shabeellaha Hoose, waxaana lagu soo bandhigay geeddi-socodka nabadda ee degmada Marka, iyada oo laga soo saaray todobo qodob ay ku heshiiyeen labada dhinac.
Shirkan oo ay daadihinayso Xukuumadda Soomaaliya gaar ahaan Wasaaradda Arrimaha Gudaha, waxaa ka soo qayb galay Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi, Madaxwaynaha Maamulka Koon-fur Galbeed, Xildhibaanada labada Aqal, Dhammaan waxgarad matalaya beelaha wax kala tirsanaya iyo Bulshada degan gobolka Shabeellada Hoose oo taageersan heshiiskan.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay shirkan dib-u-heshiinta ah ee lagu nabaddeenayo walaalaha ay dhibtu kala gaartay, waxuuna tilmaamay in ay shacabka Soomaaliyeed u diyaarsan yihiin nabadaynta dalka iyo in laga heshiiyo waxkasta oo laga dhexalay bur-burkii dawladnimo.
“Soomaaliya waa dal ay ku nool yihiin Bulsho isku-Af , Dhaqan iyo Diin ah, taasina waxay inoo fududaynaysaa in aan ka gudubno caqabadaha noo diidan in aan noqono Bulsho ku nool dhul ay ka jirto amni iyo nabad dadyowga caalamkuna uu ku daydo.
“ Nabaduna waa mida aan anaggu samaysano sidaas owgeed waa in aan aqbalnaa codsiga ay noo soo bandhigayn dadkii dushooda lagu dagaalamay, si ay qalbiyadeenu iskugu furmaan. Taasina waxay noqonaysaa midii midayn lahayd Soomaaliya oo dhan.” Ayuu yiri R/W Khayre,
Ra’iisul Wasaare Khayre ayaa faray Odayaasha dhaqan, Siyasiinta iyo bulshada ka soo jeeda gobolka Shabeelaha Hoose in ay meel uga soo wada jeestaan nabadaynta maanta ka bilaamatay gobolkooda, kuna dadaalaan meel-mirinteeda, waxuuna u mahed-celiyay cid walba oo ka qayb qaadatay dib-u-heshiisiintan.
Guddoomiya Aqalka Sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ka sheekeeyay taariikhda iyo khayraadka uu leeyahay gobolka, ayaa dhammaan ka soo qayb galayaasha u soo jeediyay in au u xusul duubtaan sidii ay u xoojin lahaayeen heshiiska ay maanta gaarayn, sidoo kalen ay ka fekeraan mustaqbalka ubadkooda.